လှည်းတန်းက BBQ နဲ့ Hotpot ရောင်းတဲ့ Budget ဆိုင်လေး - ဒိုးမယ်
စျေးတန်တဲ့ BBQ နဲ့ Hotpot ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက် တွေ့ထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားလား? မုန်ညင်း+ ကန်စွန်းရွက်+ ကြက်ဥ+ ပြောင်းဖူး+ ကြက်သား set ကို 1800 ဆိုရင် ပိုစိတ်ဝင်စားလာပြီလား? ဒီဆိုင်လေးက ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ လူစည်ကားတဲ့ လှည်းတန်းမှာပါနော်..။
ဆိုင်နာမည်က Let’s Grill တဲ့။ လှည်းတန်း ဇေယျာသီရိလမ်း (Ice berry ဘေးလမ်း) ထဲမှာပါ.. အထဲကို သိပ်မဝင်ရဘူး။ ဆိုင်က ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာက budget ဆိုင်ဆိုတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ ဇီဇာမကြောင်တတ်ဘဲ ဗိုက်ပြည့်ဖို့က အဓိကဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမဲ့ဆိုင်လေးပါပဲ..။ ရာသီဥတုကြောင့်လားတော့မသိဘူး.. Air cooler ရှိတဲ့ဘက်ခြမ်းရွေးထိုင်တာတောင် နည်းနည်းတော့ပူတယ်။ အပေါ်မှာ ပန်ကာနှစ်လုံးတော့ တွေ့ပေမဲ့ ကိုယ်တွေထိုင်ပြီးမှ ဖွင့်ဖြစ်လား ဒီအတိုင်းပိတ်ထားတာလားတောင် သတိမထားမိဘူး။ အစားငမ်းရလွန်းလို့ 😂
အရင်ဆုံး မှာဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ အအေးတစ်ယောက်တစ်ခွက်စီ Free တိုက်တယ်..။ မန်ကျည်းရည်ထင်တယ်.. အရသာလည်း အဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ အသားကိုတော့ ကိုယ်စားချင်တာကို စာရွက်မှာခြစ်ပေးတာနဲ့ သူတို့ယူပေးပါတယ်။ အရွက်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာသွားရွေးရပါတယ်။ အချဥ်ကလည်း အချိုနဲ့ အစပ် ၂ မျိုးမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးထည့်လို့ရပါတယ် (ဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာထည့်ရတာပါနော်)။ အချဥ်မှာ အစပ်ကတော့ ပိုကောင်းတယ်.. တအားစပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး အနေတော်လေးပဲ။
Hotpot အရည်ကတော့ ထပ်ထည့်ချင်ရင် သူတို့ထပ်ထည့်ပေးပါတယ်..။ စားပွဲပေါ်မှာတင် အိုးလိုက်လာချပေးထားပေမဲ့ ကိုယ်တွေကတော့ သူတို့ကိုပဲ ထပ်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာ။ 1800 set က ကြက်သားအရသာကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အမဲသားနဲ့ ဝက်အစပ်ကတော့ တော်တော်အရသာကောင်းတယ်..။အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဝက်သားလုံးကိုလည်း hotpot ရည်ထဲမှာ ခပ်ကြာကြာ ပြုတ်ထားလိုက်ရင် တော်တော်ကောင်းတယ်။ စျေးနှုန်းတွေကလည်း အသားတွေက တစ်ဘူးကိုမှ 1000 တွေ၊ အရွက်တွေဆို 200-300 နဲ့ အပ်မှိုတို့ အသားလုံးတို့က 500 ဆိုတော့ တော်တော်တန်တာပေါ့။
အတစ်သောင်းဝန်းကျင်နဲ့ တကယ်ဗိုက်ကားချင်ရင်၊ အရသာကသာ အဓိကဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုပဲ ခုံတွေက တအားကပ်နေတော့ နောက်ကျောချင်းကပ်လျက်ခုံမှာ လူရှိနေရင် မနည်းနေရာဖယ်ပြီး ထရတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီး ပြဿနာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံသိပ်မကုန်ဘဲ အရသာကောင်းကောင်းလေးစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ try ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ ထပ်သွားဖြစ်ဖို့များတယ် 😆